Ama-MacBook Pros amasha, imiphumela yezezimali ze-Apple nokunye okuningi. Okuhamba phambili kweviki kuSoydeMac | Ngivela kwa-mac
Ama-MacBook Pros amasha, imiphumela yezezimali ze-Apple nokuningi. Okuhamba phambili kwesonto eSoydeMac
UJordi Gimenez | | I-Mac OS X, eziningana
Sesivele sifikile ku-Okthoba futhi sesikulungele ukuvela kwamahemuhemu mayelana nokwethulwa ngokusemthethweni kwe-new IMacBook Pro naleso sikrini se-OLED nokunye ukuthuthuka lokho kuphawulwa yinethiwekhi. Iqiniso ukuthi ngenkathi sisalinde ukuvuselelwa noma cha, sikushiya nalokhu kuhlanganiswa okuncane kwezindaba ezigqame kakhulu ku- I'm from Mac ezesonto lokugcina likaSepthemba. Izindaba ezise-Apple zisetafuleni futhi ngendlela esikukhumbuza ngayo ukuthi sinokunikezwa okusebenzayo okungaphansi kwesonto futhi ukuthi kuyaphela kusasa, ngakho-ke ukubamba iqhaza sekushiwo.
Ake siqale ngezinkinga abanye abasebenzisi abanazo ne-new vumelanisa ne-iCloud en iMacOS Sierra entsha. Ungathola yonke imininingwane ku-Ndatshana kaPedro.
Izindaba ezilandelayo zihlobene nengqungquthela ye- imiphumela yezezimali okuzokwenziwa yi-Apple ekupheleni kwale nyanga, ikakhulukazi ngo-Okthoba 27. Iqiniso ngukuthi abasebenzisi abaningi bacabanga ukuthi cishe ngalolu suku noma ngisho nangaphambi kwalokho, kulapho i-Apple izokwethula khona ama-Macs amasha.
Izinhlobo ze-beta ze-MacOS Sierra entsha ziyaqhubeka nokuthuthuka futhi I-Apple isivele inama-betas amabili amasha akhishiwe selokhu kwakhululwa inguqulo esemthethweni. Kuleli sonto elifanayo i- inguqulo yesibili yonjiniyela nabasebenzisi abasehlelweni lwe-beta lomphakathi.
Ekugcineni sikushiya nezindaba ezithandwa kakhulu futhi ezilindelwe yibo bonke maqondana nezintsha MacBook Pro. Kuleli sonto eledlule amahemuhemu nedatha entsha ifikile ngemuva kwe-beta 2 ye-MacOS Sierra futhi silinde i-Apple ukuthi ithathe isinyathelo sokugcina futhi iqinisekise usuku olungaba khona lwesethulo. Okungenani lezo yizifiso esinazo, bese kuhlala ukuthi yonke into iqinisekiswe ngokusemthethweni.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » eziningana » Ama-MacBook Pros amasha, imiphumela yezezimali ze-Apple nokuningi. Okuhamba phambili kwesonto eSoydeMac
I-Apple Pay iyeza maduze eTaiwan
Uhlelo lokusebenza oluhamba phambili lwezithombe ku-MacOS Sierra